Farmaajo oo shacabka marin-habaabinaya | Keydmedia
Farmaajo oo shacabka marin-habaabinaya
Madaxweyne Farmaajo ayaa ku fashilmay inuu fuliyo balan-qaadyadii uu kusoo galay doorashadda, ay ay ugu horeeyaan soo celinta amniga, mideynta dalka , dib u dhiska Ciidanka iyo inuu dalka ka saarayo AMISOM, oo mudo 13 sano ah jooga Soomaaliya, iyagoo waxba qaban.
MUQDISHO, Soomaaliya - Isagoo ka hadlayay munaasabad lagu xusayay 1-da Juulyo, oo lagu qabtay Muqdisho, Madaxweynaha ayaa sheegay in dowladiisa ay ka adkaatey Al-Shabaab, taasoo shacabka uu ku marin-habaabinayo, iyadoo la ogyahay in qaraxyada ay ka dhacayaan derbiga Villa Soomaaliya.
Maalin kahor, qarax iyo hoobiyeyaal ayay Al-Shabaab ku weerartay Stadium Muqdisho xili halkaasi ay ka dhacaysay xaflad uu Farmaajo ku daah-furay dib u furida Garoonka, waxaana sababo amni iyo cabsi loo joojiyay ciyaar socotay, iyadoo dadkii daawanayay ay kasoo carareen.
Madaxweynaha Muqdisho marka uu goob rabo inuu booqdo, waxaa loo xiraa wadooyinka, oo Ciidamo isagu jira Soomaaliya iyo AMISOM ay ilaalinayaan amaankiisa cabsi laga qabo Al-Shabaab inay soo weerarto isago iyo kuwa la socda ee katirsan dowladda.
Mudo ku dhaw 4 sano ayuu Farmaajo Villa Soomaaliya ku sugan yahay, waxaana mudadaasi awoodi waysay dowladda inay Al-Shabaab ka saarto hal degmo, xili Ciidamo badan maalin walba tababaro loo soo xiro dalka gudihiisa iyo dibadda intaba.
Ciidamada AMISOM oo gaaraya tira ahaan 22,000 oo Askari ayaa gacanta ku haya xaruumaha muhiimka ee dowladda ku shaqeyso iyo ilaha dhaqaalaha, sida Dekadda iyo Garoonka diyaaradaha, waxayna tani muujinaysaa in Farmaajo hadalkiisa ah waan jebinay Al-shabaab, waan ka adkaanay ay been iyo boro-bogaando yihiin.